चियापसल, चुनाव र चौहत्तर साल | Hamro Patro
२० वर्षअगाडी अर्थात विसं २०५४ सालमा पनि यि चियापसलमा चुनावका यस्तै गफगाफहरु भएका थिए, चियाका सुर्कीसँगै राजनैतिक रस्साकस्सीहरु पनि तानिएका हुन् ।
२० वर्षपछिधेरै कुरा परिवर्तन भएपनि चियापसल र चिया गफ त उस्तै छन् । सशस्त्र द्धन्द, हत्या, हिंसा, रगत, राजाको वंशनाश, आन्दोलन, गणतन्त्र अनि संघीयताको स्वाद पाईसकेपनि बाक्लो सिसाको पाटे ग्लासमा रगं कडा हालेर बनाईएको चियाको स्वाद त उस्तै छ ।
सुनसरी जिल्ला दुहबी नगरपालिका वडा नं २ का पुराना चियापसले नवराज ठाकुर सुनाँउछन्, अहिले फेरि पुरानै दिन आएको जस्तो भएको छ । चियापसलमा चिया कम तर राजनैतिक गफ धेरै छ, भोट र पार्टीका कुराहरु गाँउलेले गर्दा सुन्न पनि गज्जब लाग्छ । २० वर्षअगाडी चिया पसलमा मलाई भाई भन्नेहरु धेरै थिए अब दाई अनि काका भन्ने पुस्ता धेरै भएको छ ।
नेपालभरिका धेरै चियापसलहरु अहिले चुनावी रगंमा रगींएका छन् फरक यत्ति हो कि २० वर्ष अगाडीको चुनावी चियागफमा प्रतिकप औसतमा रु ५ चिया थियो भने अहिले औसतमा रु १५ भएको छ ।
उतिवेला ३९१५ गा वि स र ५८ वटा साना ठूला शहरहरु थिए भने अहिले आएर सिमाकंन अनि विभाजन फरक छ । २० वर्षसम्म स्थानीय चुनाव गर्न नसक्नु नेपाल जस्तो प्रजातान्त्रिक देशकालागी दुर्भाग्य हो । आउनुहोस चर्चा गरौ हामी कसरी यस्तो २० वर्ष पछाडी पुग्यौ भनेर ?
नेपालले सन् १९९७ मा छानेका स्थानिय नेतृत्वहरुको ५ वर्षे कार्यकाल सन् २००२ मा समापन भयो जतिबेला माओवादी द्धन्द शुरुभएको पनि ६ वर्ष भईसकेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको सुरक्षास्थीती र माओवादी द्धन्दले बनाएका प्रतिकुलताका आधारमा देशमा अर्को स्थानिय चुनाव घोषणा गर्न सकेनन् । यस्तै विषयका कारणले पछि राजा ज्ञानेन्द्र द्धारा असक्षम भनि पदमुक्त भई देउबा पदवाट हटेका थिए । देउवाकै निर्णय अनुसार स्थानिय जनप्रतिनीधीहरुलाई सरकारी कर्मचारीहरुले प्रतिस्थापित गराईएको थियो, छोटो समयकालागी गरिएको त्यो निर्णयले नै बाँकीका १५ वर्ष नेपाली गाँउहरु चलाए । सन् २००५ मा राजाले शाषन सत्ता लिएपछी स्थानिय निर्वाचन घोषणा गरियो तथापि मुलधारका धेरै राजनैतिक पार्टीहरुले निर्वाचनलाई बहिष्कार गरे । यसै गरि चलिआएका घटनाक्रममा सुस्तरि आन्दोलन्, गणतन्त्र अनि आजसम्मको यात्रा त हामीलाई प्रष्ट नै छ । तर दुर्भाग्य के हो भनेँ विसं २०५९ देखि वाटै नेपाली प्रजातन्त्र स्थानिय जनप्रतिनीधी विना अपांग भएको चाँही हो ।
स्थानिय जनप्रतिनिधीको अभावमा कर्मचारीतन्त्र द्धारा चलाईएको स्थानिय शाषन पक्कै पनि पारदर्शी, जनभावना केन्द्रित अनि सहज भने थिएन । स्थानिय जनप्रतिधीहरुको चयनका लागी गरिएको यो चुनाव वास्तवमै विकासकालागी कोशेढुगां साबीत होस् ।
काठमाडौ किर्तिपुर नगरपालिका सल्यानस्थानका श्यामसुन्दर वाँस्कोटाले यसपाली २० वर्षपछि आफूले पार्टी हेरेर भन्दापनि ब्यक्ति हेरेर मतदान गरेको वताए । हाम्रो पात्रोको प्रश्नमा उन्ले पार्टी अनि सिद्धान्तका साथसाथै उम्मेदवारको ब्यक्तित्व, छवी अनि विकास प्रतीको धारणा महत्वपूर्ण हुने वताए । यस हिसाबमा श्याम अनि श्यामजस्ता धेरै यस्ता सचेत मतदाताहरु छन् जस्ले यसपालाको स्थानिय चुनावमा भाग लिए र जेष्ठ ३१ मा भाग लिनेवाला छन् ।
२० वर्षअगाडी चियापसलमा रेडियो झुण्डि्याएर सर्टवेबवाट रेडियो नेपाल सुन्दै समाचार अनि मतपरीणाम बुझ्नपर्ने अवस्था र अहिले हातहातमा मोवाईल, रेडियो, घरैपिच्छे टिभी देख्दा सञ्चारमा भने देशले कोल्टो फेरेको भन्छन् महोत्तरी सितापुर भँगाहा गाँउपालिकाका रमेश ढकाल ।
घरघरमा एन्टीना भएपछि मात्र समृद्ध ठानीने अवस्था थियो । २० वर्षसम्म पनि स्थानिय चुनाव नभएकाकारणले स्थानिय विकास राम्रो हुन नसकेकाले वैदेशिक रोजगारीका क्रम तिब्र भएको उनको तर्क छ ।
यो पनि हेर्नुहोस् : स्थानीय चुनावमा हामीले चुनेका उम्मेदवारहरुमा कसको तलब कती ?
बझागंका मनोज चन्द जोड्छन् कि २० वर्ष अगावै गाँउमा अहिलेजस्तो पसल थिएन् । चाउचाउ विस्कुट त धनीहरुले खाने कुरा हो जस्तो लाग्दथ्यो तर २० अहिले हरेक कुनाकाप्चामा यस्ताकुराहरुको प्याकेट भेटिन्छ । चियापसलमा चिया, केही सामान्य विस्कुट र चुरोटहरुमात्र पाईनेमा आजभोली थरिथरिका प्याकेट, चकलेट आदि किनेर खाने क्रम वढेको छ । मान्छेहरुको क्रय शक्ति वढेको छ अनि खेतीकिसानी गर्ने तरकारीवाली लाउने क्रम पनि क्रमश घट्दै गएको उन्को तर्क छ ।
फेरि प्रसँग चिया पसलमा नै जोड्न चाहयौ । के अब फेरि हाम्रो नेपाली चियापसलहरुमा चुनावका वार्तालाप हुन अर्को २० वर्षकुर्न पर्ने हो या ५ वर्षपछि पूनः स्थानिय निकायले स्वरुप पाउनकालागी मतदान गर्न सकिने अवस्था छ ?
सुनसरी, महोत्तरी, बझागं, किर्तिपुर लगायत सबै ठाँउमा यस चुनावले विकासको स्वाद चखाओस् । यो चौहत्तर साल सबैकालागी भलो होस् ।